Hawl -wadeenkii hore ee HBO oo Xaqiijiyay Ciddii dishay Andrea Habeenkii - Dhaqanka Pop
Hawl -wadeenkii hore ee HBO oo Xaqiijiyay Ciddii dishay Andrea Habeenkii
Kary Antholis, oo ah dukumiinti ku guuleystay Oscar iyo madaxweynihii hore ee wasaaradaha HBO, ayaa la wadaagay xoogaa aragti ah oo lama huraan ah oo khuseeya su'aasha muhiimka ah ee wadnaha 2016-ka Habeenkii .
Inta lagu jiro muuqaalka iHeartRadio's John Roa Show , Antholis - oo bilaabay Warbaahinta Sheekada Dambiyada sannadka 2019 - ayaa si toos ah loo weydiiyay astaamaha uu ahaa dhab ahaantii wuxuu mas'uul ka ahaa dilkii Andrea Cornish (oo ay ku cayaartay Sofia Black-D'Elia) oo ku saabsanayd Steven Zaillian iyo Richard Price oo ahaa siddeed qaybood.
Digniin : Haddii sabab uun aad aan weli ka sameeyey iyada oo miniseries 2016 Habeenkii , waxa soo socda ayaa runtii u qalmi doona sidii qaswade dareen kasta oo ereyga.
'Waxaan ula jeedaa, waxaan u malaynayaa inay aad u caddahay in lataliyihii maaliyaddu [Ray Halle, oo uu ciyaaray Paulo Costanzo] ay dishay laakiin… Steve, intii hawshaas oo dhan socotay, wuxuu doonayay inuu dadka dhinac ka ilaaliyo [oo] doonayay inay dadku shaki yeeshaan,' ayuu yiri Antholis . 'Laakiin sidoo kale wuxuu doonayay inuusan taas ka dhigin. Xaqiiqda ah in Naz [oo uu ciyaaray Riz Ahmed] arrintaas lagu sameeyay muddo lix ama siddeed bilood ah - waad ogtahay, joogitaanka Rikers Island waqtigaas oo dhan iyada oo aan la go'aamin dembigiisa ama aan dambi lahayn - gaar ahaan wixii ka dambeeyay Kalief Browder… waxay aad ugu fiicnayd dadka waxayna u ahayd Steve. Taasi waa sababta uu u qaatay.
Hoos ka dhageyso doodda oo dhan iHeartRadio; daqiiqadda su'aashu waxay bilaabmaysaa agagaarka 8:50 sumadda:
Sidaad dib u soo xusuusan doonto, horumarkii ugu dambeeyay ee taxanaha - oo cinwaan looga dhigay 'Wicitaanka Duurjoogta' - waxaa ku jiray waxyaalo aad u xun oo ku saabsan Ray. Naz, oo ah tuhmane asal ah, ayaa ugu dambayntii awood u leh inuu ku laabto noloshiisa ka dib markii xeerbeegti go'doonsan tahay.
Taxanaha ayaa calaamad u ah guul kale oo muhiim u ah HBO, oo waqtigaas ka soo baxay dufcadii taageerayaasha dib-u-dhiska ah ee lagu soo rogay kadib hoos u dhaca tayada xilli ciyaareedkii labaad ee Baare Dhab ah . Dhab ahaantii, qaar ka mid ah wada hadalka ka hor Habeenkii Imaanshaheeda waxay ku wareegsanayd ku dhawaaqitaanno caajisnimo leh oo laga yaabo inay noqon karto 'tan xigta Baare Dhab ah . ' Inkasta oo isbarbardhigga noocan oo kale ah uu hubaal yahay bogaadin la siiyay dhalaalka TD xilli caleema saarkii, Habeenkii wax badan bay ka faa'iideysteen inay shabakadda ku xardho aqoonsigeeda.
aaway ninkii qudhaanjada ku jiray dagaal aan dhammaad lahayn
gooldhaliyayaashii ugu fiicnaa abid abid
sida loo adkeeyo kareemka karbaashka
ricky from boyz n hood